Ciyaaraha – Android – Vessoft
Minecraft – ciyaar sandbox ah oo leh adduunyo furan oo furan, kaas oo marka ugu horeysa kuu furmaya fursado aan dhammaad lahayn oo muujinaya hal-abuurnimadaada iyo horumarinta xirfadaha hal abuurka.
Hearthstone – ciyaarta guddiga khadka tooska ah ee ciyaarta kaas oo salka ku haya dagaalada ku saleysan hal dhinac ee u dhexeeya laba iska soo horjeeda. Ciyaartu waxay bixisaa dhaqdhaqaaqyo istiraatiiji ah oo fara badan iyo qorsheyaal lagu gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan.
FIFA 15 Ultimate Team – jilitaanka kubada cagta oo leh ciyaartoy badan oo kubada cagta ah, kooxo iyo horyaallada kubada cagta. Ciyaarta ayaa adeegsata sawiro tayo sare leh iyo dhaqdhaqaaq macquul ah oo ciyaartoy ah.
Maalinta Hay – waa ciyaar caan ka ah maareynta beeraha iyo horumarinta beeraha. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad beerto dhir kala duwan, guryo dhisto iyo inaad leedahay xayawaan rabaayad ah.
Ciyaarta ayaa si is ogow of caafimaad, fayo-qabka, tamarta iyo sifooyinka kale ee xayawaanka. Ciyaarta Kumaan balaadhan oo ah waxyaabaha kala duwan ee xayawaanka ee dalwaddii furmay.
Habka Deer Hunter – Qalabka muusikada ee lagu ugaarsado xayawaan duurjoog ah oo kaladuwan meelo qalaad. Sidoo kale ciyaarta, waxaa jira aarsenal weyn oo hub ah oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee ugaarsiga.
Agar.io – ciyaar arcade leh ciyaar xiiso leh oo loogu talagalay tartanka khadka tooska ah ee lala galo ciyaartoy kale. Ciyaarta, waxaa jira tabo xeelado kala duwan iyo gunooyin gaar ah oo loogu talagalay kala duwanaanta ciyaarta.
Kulan Arcade ayaa si ay u ilaaliyaan guriga ciyaaryahan weerar ku saabsan xayawaanka waalan. Kulankaan ayaa habab badan si ay u ilaaliyaan guriga ka dhanka ah xayawaanka oo leh sifooyin iyo xirfada kala duwan.
Angry Birds – ciyaar arcade oo leh sheekooyin xiisa leh iyo raad maqal qosol leh. Ciyaarta, waxaa jira heerar badan oo leh kordhinta kakanaanta iyo jilayaasha kala duwan ee leh awooda gaarka ah.
Kulan xiiso leh ayaa waxaa la abuuray ka dib markii taxanaha eponymous aamusnaan ah. Ciyaaryahanka ayaa ka filan kartaa adventures xiiso leh jilayaasha ugu cadcad.
2048 – ciyaarta khamaarka ee loogu talagalay horumarinta caqliga iyo ka fikirka ciyaartoyga. Ciyaarta ayaa leh ciyaar cajiib ah inta lagu gudajiro kaas oo ciyaaryahanka uu si tartiib tartiib ah u helayo rikoorka dhibcaha.
ciyaar door-ciyaareed The meesha aad ka raadin kartaa oo qaadi Pokemon on jidadka magaalada iyada oo la isticmaalayo camera ah ee casriga ah. Ciyaarta ayaa awood u leh inay isgaadhsiin oo ay kula tartanto ciyaartoyda kale.
Ciyaarta ayaa u drive xawaaraha oo laga adkaado caqabadaha kala duwan ee track 3D. Kulankaan ayaa wuxuu isticmaalaa saamaynta midabo iyo sawiro 3D wanaagsan.
Megapolis – istiraatiijiyad caan ah oo ku saabsan dhismaha iyo horumarka magaalada. Fursadaha ballaaran ee dhismaha, dhaqaalaha iyo awooda fulinta ayaa u furan ciyaaryahanka.
Qoryaha – Masawiye muujinaya hub kala duwan iyo macluumaad ku saabsan. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad toogato yoolalka kala duwan oo aad xaqiijiso astaamaha hubka.
Castle TD – istaraatiijiyadda arcade ee qaab dhismeedka difaaca. Ciyaarta dhexdeeda waxaa ku yaal munaasibado tiro badan oo waaweyn iyo yey leh sharaxaad faahfaahsan oo lagu dhisayo ilaalinta ugu habboon.